Edito Ilay “valala tsy an-tanana”
« Tery ». Tsy misy voambolana mahalaza azy ankoatr’izay raha hiresaka ny momba ny atao hoe demokrasia eto Madagasikara isika.
“Valala tsy an-tanana tsy atolo-jaza”, hoy ny fahendrena Malagasy.
Nampahatsiahivin’ny filoham-pirenena teo aloha izay nifaninana tamin’ny filoham-pirenena ankehitriny tamin’ny fihodinana faharoa nandritry ny fifidianana farany teo io teny io. Mba azon’ny filoham-pirenena Malagasy amin’izao fotoana izao ve ny dikan’izany ohapitenenana izany ? Efa tsy anaty fampielezan-kevitra intsony isika. Ny zava-misy anefa dia mbola ezahan’ny fitondrana ankehitriny tohizana hatramin’izao ihany ny fampanofisana isan-karazany. Valalanina ianao mahita ny kabarin’andriamatoa filoha tamin’ireo Malagasy monina any Dilambato farany teo satria dia latsaka ambany ireny efa paradisa ireny ny eto an-tanàna. Isika rehetra samy mbola hampanantenaina ilay valala tsy an-tanana. Nihitsoka ny fifampiraharahana mikasika ny vidin-tsolika. Mbola miandry koa ny karama farany ambany 200.000 ariary. Asa na mba efa misy fototrana tranobe mijoalajoala ao anaty IEM mipetraka any ho any na tsia fa ny zavatra hita aloha dia serasera sy sarisary mipoapoaka lava izao no ezahana hanakonana ireo tsy fahombiazana. Navela kely aloha ny resaka fanarenana ny rova fa zara aza tafakatra CAN indray ny Barea dia ezahana sarihina any ny mason’ny maro. Tsara ny manohana ny ekipam-pirenen’ny baolina kitra saingy mariky ny tena fitiavan-tanindrazana koa ny tena fitsinjovana ireo Malagasy mbola fadiranovana.